२१ औं शताव्दीको यो युगमा सञ्चारको क्षेत्र धेरै अगाडी बढिसकेको छ । गाउँदेखी शहरसम्मका प्रायजसो सबै सञ्चारको पहुँचमा छन् । हाम्रो देश नेपालमा पनि सञ्चारको क्षेत्रमा धेरै लगानि र प्रगतिहरु देखिएका छन् । सञ्चारको माध्यम मध्येको रेडीयो धेरै नागरिकमाझ एकैपटकमा सजिलै पुग्न सक्ने माध्यम हो । नेपालमा पनि रेडीयोको संख्या करिव ४ सयको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । समाज परिवर्तन र समाजका आम नागरिकहरुलाई सुसुचित गर्न रेडियोहरुले निकै महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका छन् । यही समाज परिवर्तनको लागि बाग्लुङ जिल्लाको खर्वाङ बजारमा २५० वाट क्षमताको रेडीयो सारथीले आफ्नो प्रशारण २०६७ माघ १ गतेबाट शुरु गरेको छ ।
यो रेडीयो सारथी बाग्लुङ जिल्ला सदरमुकाम भन्दा वाहीरको पहिलो रेडीयो हो । छोटो समयमा लाखौं स्रोताको अपार मायाँ र साथका कारण रेडीयो सारथीले आफ्ना कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगि रहेको छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका स्रोताको मागकै आधारमा वि.स. २०७० सालदेखी www.radiosarathi.com.np को वेवसाईट सँचालनमा ल्याएको छ । भने वि.स. २०७२ सालको वार्षिकोत्सवपछि रेडीयो सारथीले आफ्नो प्रशारण लनलाईनमा २४ घण्टे बनाएको छ । खर्वाङ प्रमूख व्यापारीक केन्द्र बुटवल र सदरमुकाम बागलुङको नाकाको रुपमा रहेको ठाउँ हो । यहाँ तिव्र विस्तारमा रहेको बाग्लुङ, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङजा, पर्वत, म्याग्दी, राेल्पा लगाएतका जिल्लाका प्रमूख बजार र गाउँबस्तीमा लाखौं स्रोतासँग यो रेडीयोको निकै राम्रो पहुँच रहेको छ ।
रेडियो नै किन ?
अहिलको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ती, सँघ सँस्थाले कुनै पनि जानकारी सहज रुपमा धेरै जना स्रोता माझ पुराउनको लागि आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग सबैभन्दा बढी विश्वासिलो हुनेछ । आम सञ्चार माध्यममा पनि रेडियोको प्रभावकारिता ज्यादै बढी रहेको कुरा पनि नकार्न सकिदैन । हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुक र अरु सञ्चारमाध्यमको पहूँच गाँउघरसम्म भैनसकेको अवस्थामा सूचना संप्रेषणको लागि रेडियो नै सबैको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । अन्तराष्टिय व्यापारीहरु आफ्नो कमाईको करिव २० प्रतिशत मुनाफा विज्ञापनमा खर्च गर्ने गरेका छन् । विज्ञापन विना व्यापार व्यवसायको कल्पना गर्न पनि सकिदैन ।
सारथीको लक्षित समुदाय
यस रेडियो सारथी बाग्लुङ, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङजा लगाएतका जिल्लाका करिव २० लाख प्रत्यक्ष लक्षित स्रोता समुदाय वनाएको छ । रेडियोले बालबालिका, युवायुवती र वृद्धबृद्धासम्मलाई समान महत्व र स्थान दिने छ भने पिछडिएको समुदाय हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ । यस रेडीयोले कुनै पनि व्यक्ती तथा सँस्था विशेषको पक्ष विपक्षमा वकालत गर्दैन ।
रेडीयो सारथीका सवल पक्षहरु
हाल धेरै रेडीयोले भोगी रहेको लोडसेडीङको समस्या रेडीयो सारथीले स्थानीय Micro Hydro को विद्युत उत्पादनका कारण यो समस्या भोग्नु परेको छैन । अर्थाथ रेडीयो सारथीको नियमीत प्रशारणमा कुनै समस्या छैन ।
बाग्लुङ, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङजा, पर्वत, म्याग्दी, राेल्पा लगाएतका आसपासका क्षेत्रमा पहिलो २४ घण्टे रेडीयो तथा अध्याधीक स्रोता माझ लोकप्रिय रहेको ।
यस रेडीयो सारथीले अत्याधुनिक उपकरण सहीत आफ्नो प्रशारण गरीरहेकोले यस्को प्रशारण गुणस्तरीय रहेको ।
रेडीयाका स्टाफ् तथा कर्मचारीहरु पूर्ण श्रमजिवी पत्रकार ऐन लागु भएकोले स्थायी कर्मचारीको व्यवस्था भएकोले उत्पादीत कार्यक्रम गुणस्तर र नियमीत प्रशारणमा रहेको ।
सुपथ मुल्यमा सूचना, विज्ञापन तथा कार्यक्रम प्रशारण गर्ने गरेको तथा सेवाको भावनाका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम प्रशारणमा रहेको ।
Add on Music को नयाँ नियम अनुसार नेपालमै पहिलो पटक सन्देश विज्ञापन प्रशारण गर्ने अवसर रहेको ।
रेडीयो सारथीका RJ तथा कर्मचारीहरु पूर्ण दक्ष भएकाले रेडीयोले प्रशारण गर्ने कार्यक्रम स्रोतामाझ निकै लोकप्रिय रहेको ।
स्थानीय व्यापारी, सँघसँस्था तथा राष्ट्रीय स्तरका विभिन्न उत्पादन कम्पनी तथा विज्ञापन एजेन्सीसँगको राम्रो सम्बन्ध तथा सहकार्य रहीरहेको । आदी
२०६७ माघ १ गतेबाट नियमीत प्रशारण शुरु गरेको रेडीयो सारथीले आफ्नो प्रशारण अवधी २४ घण्टामा पुराएको छ । सोही अनुसारको विज्ञापन दर रेट तल उल्लेख गरीएको छ । उल्लेखीत दररेटमा 13% VAT जोडीएको छैन । साथै विज्ञापन एजेन्सीका लागि 15% एजेन्सी शेवा शुल्क शुरक्षित गरीएको छ । तल उल्लेख गरीएको दररेटमा अापसी समझदारीमा घडवड हुन सक्नेछ । जसका लागि सिधा सम्पर्क 9741337014
विहान ६:००–९:०० बजेसम्म, वेलुका ६:००–९:०० बजेसम्म
विहान ९:००–१२:०० बजेसम्म, वेलुका १२:००–६:०० बजेसम्म, राती ९:०० देखी विहान ६:०० बजेसम्म
रु.२०० प्रति एपिसोट (२० सेकेण्ड भित्र)
रु.३०० प्रति एपिसोट (४० सेकेण्ड भित्र)
रु.४०० प्रति एपिसोट (६० सेकेण्ड भित्र)
रु.१५० प्रति एपिसोट (२० सेकेण्ड भित्र)
रु.२०० प्रति एपिसोट (४० सेकेण्ड भित्र)
रु.२५० प्रति एपिसोट (६० सेकेण्ड भित्र)
न्यूज बुलेटीन (कायाकैरन, थाहा अपडेट, नेपाल खवर, नेपाल दर्पण, सारथी हालचाल, विविसी)
रु.५०० प्रति एपिसोट Time Check सँगै (वढीमा ३० सेकेण्डमात्रै)
रु.४५० प्रति एपिसोट समाचारको पहिलो विज्ञापनमा (४० सेकेण्ड भित्र)
रु.४०० प्रति एपिसोट समाचारको दोस्रो विज्ञापनमा (४० सेकेण्ड भित्र)
लोकप्रिय कार्यक्रमको प्रायोजन (शुभविहानीको राशीफल, वस्तीका सुसेली, सिने सँसार, सारथी क्वीज, सँग च्वाईस)
रु.१००० प्रति एपिसोट
लोकप्रिय कार्यक्रमको प्रायोजनमा प्रत्येक कार्यक्रममा
एक घण्टाको कार्यक्रम भए शुरुमा, विच र अन्त्यमा गरी ३ पटक विज्ञापन प्रशारण हुने ।
आधा घण्टाको कार्यक्रम भए शुरुमा र अन्त्यमा गरी २ पटक विज्ञापन प्रशारण हुने ।
कम्तीमा २ मिनेट प्रायोजकका बारेमा बोलीने ।
कार्यक्रम प्रायोजनको प्रमाणपत्र उवलव्ध गराईने ।
कुनै सन्देश वा विज्ञापन दैनिक रुपमा धेरै पटक प्रशारण गर्नुपर्ने अवस्थामा यो समय बढि उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि कम्तीमा विहान ६ बजेदेखी बेलुकी ९ बजे सम्मका लागि १६ एपिसोट हुनुपर्नेछ । यस्को लागि दैनिक रु. २००० शुल्क लाग्नेछ । जुन अन्य कुनै पनि विज्ञापन दररेट अनुसार निकै न्यून शुल्क हो । लामो समय र धेरै एपिसोट हुने भएकोले यस्तो दररेट कायम गरीएको हो ।
निकै लोकप्रिय गित सँगितको म्यूजिक वजिरहेको समयमा ट्रयाकमा गित बज्दा त्यसको सट्टामा विज्ञापन तथा
सन्देश बजाउने तरीका नै Add On Music हो । यो सम्भवतः नेपालमै पहिलो प्रयोग हो । यो रेडीयो सारथीमा परीक्षणका क्रममा निकै लोकप्रिय बनेको छ । रेडीयोमा विज्ञापन आउँदा अन्य रेडीयोनै सुन्ने अवस्था भएकोले स्रोताले विज्ञापन सुन्नै पर्ने अवस्था सृजना गर्नु Add On Music को उद्देश्य हो । जसको प्रत्यक्ष फाईदा विज्ञापनदालाई रहेको हुन्छ । यो नियम अनुसार विज्ञापन सन्देश बजाउने उक्त विज्ञापन तथा सन्देश वढिमा ४५ सेकेण्डको मात्र हुनुपर्दछ । यो तरीका लागि रेडीयो सारथीले गित सँगीत उत्पादन गर्ने संस्था र व्यक्तीसँग सम्झौता गरेको हुन्छ । भने पूर्व स्वीकृत अनुसार गरीएको हुन्छ ।
विज्ञापनदाताले प्रत्येक एपिसोटका लागि गितसँगित आँफै रोज्न पाउनेछ । तर यस्तो अधिकार निश्चीत शर्तका आधारमा रेडीयोको Technicean लाई पनि दिन सक्नेछ ।
गितसँगित जुनसुकै विद्याको पनि हुन सक्दछ ।
विज्ञापन तथा सन्देश वढिमा ४५ सेकेण्डको मात्र हुनुपर्दछ ।
यो नियम अनसार विज्ञावन सन्देश बजाउँदा रु.४०० प्रति एपिसोट शुल्क लाग्नेछ । भने प्रत्येक नयाँ गित अनुसार रु.२५ अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ ।